Tamarta dib loo cusboonaysiin karo iyo kuwa aan dib loo cusboonaysiin karin: sifooyinka iyo noocyada | Dib -u -cusboonaysiinta Cagaaran
Tamarta dib loo cusboonaysiin karo
Tamarta biyaha badda
Tamarta Qoraxda Photovoltaic
Tamarta kuleylka ee kuleylka ah
Dib u warshadaynta
Tamarta la cusboonaysiin karo iyo kuwa aan la cusboonaysiin karin
Jarmal Portillo | 23/09/2021 19:23 | Tamarta dib loo cusboonaysiin karo
Waxaan leenahay ilaha tamarta waa la cusboonaysiin karaa, marka ay ka timaaddo ilo dabiici ah oo aan dhammaan doonin waqti ka dib. Intaa waxaa dheer, waa nadiif, ma wasakhayso waxayna leedahay khayraad kala duwan. Waxaa jira meelaheena tamar kala duwan oo la cusboonaysiin karo. Horumarinta teknolojiyadda, dadku waxay ogaadeen habab badan oo loo adeegsado tamarta meeraheena iyada oo aan loo rogin shidaalka fossil -ka oo ay sii wadaan la tacaalidda saameynta isbeddelka cimilada. Waxaa jira noocyo kala duwan tamarta la cusboonaysiin karo oo aan la cusboonaysiin karin mid walbana wuxuu leeyahay astaamo u gaar ah.
Maqaalkan waxaan kuugu sheegi doonnaa kuwaas oo ah tamarta ugu weyn ee la cusboonaysiin karo iyo kuwa aan la cusboonaysiin karin ee adduunka.
1 Tamarta la cusboonaysiin karo iyo kuwa aan la cusboonaysiin karin
1.4 Tamarta tamar-dhuleed
1.5 Tamarta badda
1.6 Tamarta Haydarooliga
1.7 Tamarta cadceedda
2 Tamarta dib loo cusboonaysiin karo iyo kuwa aan dib loo cusboonaysiin karin: shidaal fosil
Kuwani waa shidaal ama shidaal gaas ah oo laga soo saaray agabka noolaha ee dhirta ama xayawaanka. Waa nooc ka mid ah tamarta la cusboonaysiin karo oo aan dhammaanayn oo dabooli karta baahiyaha gaadiidka. Isticmaalka shidaalkaan cagaaran, waxaan yareyn karnaa ku tiirsanaanta saliidda waxaanna yareyn karnaa dhaawaca uu u geysto deegaanka. Waxaa ka mid ah kuwa ugu muhiimsan noolaha, waxaan helnay biodiesel iyo bioethanol.
Nooc kale oo ah tamarta la cusboonaysiin karo waa tamar -biyoodka. Waa walax dabiici ah oo loo isticmaalo in tamar laga dhaliyo. Waxay soo aruurisaa koox maaddo dabiici ah leh heterogeneity iyo astaamo isha kala duwan. Biyomaas waxaa loo tixgelin karaa inay tahay arrin dabiici ah oo laga soo saaray hababka noolaha taas oo loo isticmaali karo tamar ahaan.
Tusaale ahaan, waxaan ka helnaa qaybta organic ee beeraha iyo kaymaha, wasakhda, wasakhda wasakhda iyo qashinka adag ee magaalada. Waxaa jira siyaabo badan oo loo adeegsado tamar -biyoodka.
Asal ahaan, tamarta noocan ahi waxay ku salaysan tahay ururinta tamarta kinetiga ah ee cufka hawadu haysto iyo ka dhalinta korontada. Tan iyo wakhtiyadii hore, Waxay ahayd ilaha tamarta ee aadanuhu u adeegsado inay ku koraan maraakiibta shiraaca, shiidaan hadhuudhka, ama biyaha bamgareeya.
Maanta, marawaxadaha dabaysha ayaa loo isticmaalaa inay koronto ka dhaliyaan dabaysha. Iyadoo ku xiran hadba sida aad u afuufto, waxaad heli kartaa wax ka badan ama ka yar. Waxaa jira laba nooc oo ah tamarta dabaysha, badweynta iyo dhulka.
Waa tamar ku kaydsan dhulka dushiisa oo kulayl ah. Dhulkeena waxaa ka buuxa tamar waxaana u isticmaali karnaa tamartaas inaan soo saarno koronto. Waa wax-soo-saar 24-saac ah oo aan kala go 'lahayn, oo aan dhammaad lahayn, aan dhammaad lahayn, haba yaraatee wax wasakh ah lahayn.
Waa qaybo tiknoolajiyadeed oo adeegsan kara tamarta badda. Waxay ku xiran tahay cimilada mar walba, awoodda badweyntu waa mid aan la joojin karin, laakiin sidoo kale waxay si fiican u isticmaashaa tamarta.
Hirarka, hirarka, hirarka badda, iyo kala duwanaanshaha heerkulka inta u dhaxaysa dusha sare ee badda waxaa loo isticmaali karaa ilaha tamarta. Intaa waxaa dheer, faa'iidadeedu waxay tahay inaysan soo saarin waxyeello deegaan ama muuqaal ah oo ay tahay inaan tixgelinno.
Tamarta Haydarooliga waa tamarta uu isticmaalo tamarta kinetic ee jirka biyaha. Sababtoo ah biyo -dhaca ay sababtay isku -dheelitirnaan la'aanta, awoodda biyuhu waxay riixi kartaa marawaxadaha dhaliya korontada. Waxaa xusid mudan in nooca tamarta la cusboonaysiin karo ay ahayd isha ugu weyn ee wax soo saarka korontada ee baaxadda leh ilaa badhtamihii qarnigii XNUMXaad.
Shaqadiisa waxaa loo aaneeyaa dhirta korontada laga dhaliyo, oo loo aqoonsaday ilaha tamarta ugu bay'ada badan.
Waxay isticmaashaa qorraxda cadceeda si ay si toos ah ugu beddesho shucaaca qoraxda tamarta korontada. Waad ku mahadsan tahay unugyada photovoltaic, shucaaca qorraxda ee ku soo dhacaya ayaa kicin kara elektarooniga wuxuuna abuuri karaa kala duwanaansho suuragal ah. Tirooyin badan oo qorraxda ku xiran, weynaato kala duwanaanshaha suurtagalka ah.
Waxa kale oo jira noocyo kale oo tamarta qorraxda ah marka laga reebo sawir -qaade sida tamarta kulaylka cadceedda iyo tamar -kululeeyaha qoraxda. Tamarta kuleylka qorraxda ayaa ah noocyo kala duwan oo tamarta qorraxda ah waxayna mas'uul ka tahay buuxinta baahiyaha kuleylka ee dhismaha, warshadaha iyo beeraha. Tani waa hab aad u hufan oo loo adeegsado tamarta cadceeda.
Dhinaca kale, tamarta qorraxda ee kulaylku waxay isticmaashaa muraayado ama muraayado ku ururin kara shucaaca cadceedda meelaha yaryar. Sidan ayay ku gaari karaan heerkulka sare sidaas darteedna kuleylka ugu beddelaan koronto dareereyaal.
Tamarta dib loo cusboonaysiin karo iyo kuwa aan dib loo cusboonaysiin karin: shidaal fosil
Waqtigan xaadirka ah, noocyo kala duwan oo shidaal fossil ah ayaa loo isticmaalaa tamar. Mid kastaa wuxuu leeyahay astaamo iyo asal kala duwan. Si kastaba ha ahaatee, dhammaantood waxay ka kooban yihiin tamar badan ujeeddooyin kala duwan.
Waa kuwan kuwa ugu waaweyn:
Kaarboon macdanta Waa dhuxul loo isticmaalo tareenada. Waxaa inta badan kaarboon laga helaa kaydad waaweyn oo dhulka hoostiisa ah. Si loo soo saaro, miino ayaa la dhisaa halkaas oo khayraadka laga soo saaro.
Saliid. Waa isku -dar ah dhowr hydrocarbons oo ku jira wejiga dareeraha. Waxay ka kooban tahay wasakh kale oo waawayn waxaana loo isticmaalaa in lagu helo shidaal iyo badeecooyin kala duwan.
Gaaska dabiiciga ah. Waxay ka kooban tahay inta badan gaaska methane. Gaaskaani wuxuu u dhigmaa qaybta ugu khafiifsan ee hydrocarbons. Sidaa darteed, dadka qaarkood waxay yiraahdaan gaaska dabiiciga ahi wuu ka wasakhaysan yahay oo nadiif ahaana. Waxaa laga soo saaraa goobaha saliidda ee gaaska dabiiciga ah.
Ciiddii daamurka ahayd iyo tiirarkii saliidda. Waa agabyo ay sameeyeen ciid cabirkeedu yahay dhoobada oo ay ku jiraan hadhaaga yar ee maaddooyinka dabiiciga ah. Maadadan dabiiciga ahi waxay ka kooban tahay qalab burburay oo leh qaab aad ugu eg kan saliidda.
La tamarta nukliyeerka waxaa kaloo loo tixgeliyaa nooc ka mid ah shidaalka fossil. Waxaa loo sii daayaa natiijada falcelin nukliyeer oo loo yaqaan fission nuclear. Waa kala qaybsanaanta nuclei ee atamka culus sida yuraaniyamka ama plutonium.
Waxaa loo tixgeliyaa kuwo aan dib loo cusboonaysiin karin maadaama saliidda laga helo ilo biyo fadhiisiya. Taas macnaheedu waa in maaddada samaysantay ay tahay mid dabiici ah oo ay dabooshay wasakh. Si qoto dheer oo qoto dheer, oo hoos imanaya ficilka cadaadiska dhulka dhulka, ayaa loo beddelaa hydrocarbons.
Nidaamkani wuxuu qaataa malaayiin sano. Sidaa darteed, in kasta oo saliiddu si joogto ah loo soo saaro, haddana waxaa lagu soo saaraa si aad u yar marka loo eego baaxadda aadanaha. Maxaa ka sii badan, heerka isticmaalka saliidda ayaa ah mid aad u dheereeya oo taariikhda isticmaalkiisa la qorsheeyay. Falcelinta samaynta saliidda, bakteeriyada aerobic -ku waxay marka hore wax ka qabataa bakteeriyada anaerobic -na waxay soo muuqataa goor dambe, oo qoto dheer. Dareen -celintaani waxay sii deynayaan oksijiin, nitrogen, iyo baaruud. Saddexdaa cunsur waxay qayb ka yihiin xeryahooda hydrocarbon -ka aan kacsanayn.
Waxaan rajaynayaa in macluumaadkan aad wax badan uga baran karto tamarta la cusboonaysiin karo iyo mid aan la cusboonaysiin karin.
Wadada buuxda ee maqaalka: Cusbooneysiinta Cagaaran » Tamarta dib loo cusboonaysiin karo » Tamarta la cusboonaysiin karo iyo kuwa aan la cusboonaysiin karin
Ku keydi biilka korontada
Ma rabtaa inaad wax ku keydiso biilka korontada? Hel qiimo dhimis bilaash ah € 30 adoo isticmaalaya nambarka HOLA30.
Ku keydi 100% tamarta cagaaran
Sida loo sameeyo shumacyada
Hesho qoraalladii ugu dambeeyay ee ku saabsan tamarta la cusboonaysiin karo iyo bey'ada.
Waxaan nahay degel mas'uul ah C02!
Ku qor Wargeys